Nchedo Black Rhino nọ n'ihe ize ndụ na Tanzania na -ewere ọnọdụ ọhụrụ, na -enyere ndị njem aka
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Tanzania » Nchedo Black Rhino nọ n'ihe ize ndụ na Tanzania na -ewere ọnọdụ ọhụrụ, na -enyere ndị njem aka
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • omenala • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Nchedo Black Rhino nọ n'ihe egwu pụtara nchekwa njem
Mpaghara Nchebe Ngorongoro dị na Tanzania n'izu a wepụtara ụzọ nchedo ọhụrụ iji chekwaa rhino ojii kacha nọrọ n'ihe ize ndụ n'ime gburugburu ebe nchekwa ya na mpaghara mpaghara East Africa ndị ọzọ. N'ịbụ onye jikọrọ aka na Ministry of Natural Resources na Tourism site na nkwado teknụzụ sitere na Frankfurt Zoological Society (FZS), Ngorongoro Conservation Area Authority (NCAA) na -eji akara pụrụ iche na ngwaọrụ elektrọnik echebe ndị rhino ya ugbu a maka nlele redio.
N'ime ọnwa a, a ga -aka akara anụ ọhịa iri na mpaghara nchekwa.
Ọnụ ọgụgụ rhinos bi n'ime ndagwurugwu Ngorongoro arịala 71, n'etiti ha bụ ụmụ nwoke iri abụọ na abụọ na ụmụ nwanyị 22.
A ga -eji rhinos niile bi na Tanzania akara akara akara site na mkpụrụedemede “U” ka ọ dị iche na ndị nọ na Kenya agbata obi, ebe a ga -eji akara “V” akara nọmba anụmanụ nke ọ bụla.
Nọmba gọọmentị ewepụtara maka rhinos na Ngorongoro na Tanzania na -amalite site na 161 ruo 260, ndị ọrụ nchekwa kwuru.
A ga -etinye akara njirimara na ntị ntị na aka nri rhinos, ebe a ga -edobe 4 nke mammals ụmụ nwoke na ngwaọrụ maka nleba anya redio iji nyochaa mmegharị ha mgbe ha na -eme ngabiga karịa oke nchekwa.
Nchebe nke rhinos ojii ojii ndị a dị na Ngorongoro na -aga n'oge a mgbe ndị ọkachamara na -ahụ maka nchekwa na -eche nsogbu metụtara ọrụ mmadụ na -abawanye na mpaghara ihe nketa a n'ihi ọgba aghara na ọnụ ọgụgụ mmadụ na -ekerịta gburugburu ebe obibi ya na anụ ọhịa.
Chekwaa Rhino International, otu United Kingdom (UK) na -ahụ maka nchekwa nchekwa maka nchekwa anụ ọhịa, kwuru na akụkọ ọhụrụ ya na ọ bụ naanị rhinos 29,000 fọdụrụ n'ụwa. Ọnụ ọgụgụ ha belatara nke ukwuu n'ime afọ 20 gara aga.
Ndị ọrụ nyocha sitere na Sigfox Foundation ejirila ngwa pụrụ iche nwere ihe mmetụta nwere rhinos na mpaghara ndịda Africa wee soro mmegharị ha wee zọpụta ha n'aka ndị na -achụ nta anụ, ọkachasị na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia ebe achọrọ mpi rhino.
Site na nsuso ụmụ anụmanụ, ndị nyocha ahụ nwere ike ichebe ha n'aka ndị na -achụ anụ ma ghọta nke ọma omume ha iji chebe, wee gbanwee ha ka ha mụọ ha, n'ime mpaghara echekwara wee chekwaa ụdị.
Sigfox Foundation na -arụkọ ọrụ ugbu a na 3 nke nnukwu ụlọ ọrụ na -ahụ maka nchekwa anụ ọhịa iji gbasaa usoro nsuso rhino na ihe mmetụta.
Akụkụ nke mbụ nke nnwale nsuso rhino, akpọrọ "Ugbu a Rhino Speak," mere na July 2016 ruo February 2017 na mpaghara na -echebe rhino ọhịa ọhịa 450 na South Africa.
South Africa bụ ebe pasent 80 nke rhinos ndị fọdụrụ n'ụwa. Ebe ọnụ ọgụgụ ndị na -achụ nta anụla belatara, enwere nnukwu ihe egwu ịla n'iyi rhino n'afọ ndị na -abịanụ ọ gwụla ma gọọmentị Afrịka emee ihe siri ike ịzọpụta nnukwu anụmanụ ndị a, ndị ọkachamara Save the Rhino kwuru.
Black rhinos so n'ime anụmanụ kacha egbu egbu na nke nọ n'ihe egwu dị na Afrịka ebe ọnụ ọgụgụ ha na -agbada n'ike n'ike.
Nchekwa anụ ọhịa rhino bụzi ebumnuche dị mkpa nke ndị nchekwa na -achọ ịhụ na ha ga -adị ndụ n'Afrịka mgbe anụ ọhịa siri ike nke gbubiri ọnụọgụ ha n'ime iri afọ gara aga.
Ogige Ntụrụndụ Mkomazi dị na Tanzania bụzi ogige anụ ọhịa mbụ na East Africa pụrụ iche na nke raara onwe ya nye maka njem nlegharị anya rhino.
N'ilegide Ugwu Kilimanjaro nke dị n'ebe ugwu, na Tsavo West National Park dị na Kenya n'akụkụ ọwụwa anyanwụ, Mkomazi National Park nwere ọtụtụ anụ ọhịa gụnyere ihe karịrị ụdị anụmanụ iri abụọ na ihe dị ka ụdị nnụnụ 20.
Site na George Adamson Wildlife Preservation Trust, eweghachiri rhino ojii ahụ n'ime ebe echekwara nke ọma na ogige n'ime Mkomazi National Park nke na-echekwa ma na-amụkwa rhino ojii.
E si n'ogige ntụrụndụ ndị ọzọ dị n'Africa na Europe bugara rhinos ojii ojii na Mkomazi. Black rhinos na Afrịka abụrụla ụdị anụmanụ kacha achụ nta na -eche oke mbibi ha ihu n'ihi oke agụụ na Far East.
N'ime nkpuchi ebe di kilomita 3,245, Mkomazi National Park bu otu n'ime ogige ndozi ohuru nke Tanzania ebe ana echedo umu nkita tinyere rhinos ojii. Ndị na-eme njem nleta na-eleta ogige a nwere ike ịhụ nkịta ọhịa nke agụnyere n'ime anụmanụ ndị nọ n'ihe ize ndụ na Africa.
N’ime iri afọ ndị gara aga, rhino ojii na-agagharị agagharị n’etiti mbara igwe na Mkomazi na Tsavo, gbatịa site na Tsavo West National Park dị na Kenya ruo na mgbada ugwu nke Ugwu Kilimanjaro.
Nwa rhino ojii nke Afrịka bụ ụmụ amaala bi na steeti ọwụwa anyanwụ na ndịda Afrịka. A na-ekewa ha dị ka ụdị ihe egwu dị egwu nke nwere opekata mpe ụdị atọ nke International Union for Conservation of Nature (IUCN) kwupụtara na ọ nwụọla.